के नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ? – korea pati
May 12, 2020 Korea patiLeaveaComment on के नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ?
विकास बहुआयामिक विषय भएको कुरा अब नयाँ रहेन । यद्यपि, सभ्यताक्रममा सामाजिक, राजनीतिक हिसाबले व्यवस्थित हुँदै जाँदा आर्थिक विकास नै समग्र विकासको मेरुदण्ड भएको छ । अर्थशास्त्रको समष्टि दृष्टिकोणले राष्ट्रिय उत्पादन र सूक्ष्म दृष्टिकोणले हरेक नागरिकको आर्थिक कल्याण नै आर्थिक विकासका प्रमुख सरोकार हुन् । मुलुकमा आम उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनाले
मात्र यी दुवै सरोकारको गुणस्तरीय सम्बोधन गर्न सक्छ । आम रोजगारी किन पनि आवश्यक छ भने, व्यक्तिको तहबाट हेर्दा बेरोजगारी सबैभन्दा ठुलो आर्थिक समस्या हो । गरिब व्यक्ति नै बेरोजगार भएपछि पिडा चर्कने हो, नेपालमा भएको त्यही हो । बोझिलो कल्याणकारी कार्यक्रम गरिरहेको राज्यले रोजगारी सिर्जनामा
अघि बढ्ने हो भने बोझ स्वतः घट्छ । तर युवाहरूको रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीको सिद्धान्तमा अडेका हामीले खासै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ । अर्थात्, मुलुकमा बृहत्, सशक्त र नतिजामुखी उत्पादन प्रक्रियाको यथोचित प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ । आखिर किन ?अर्थतन्त्रको अध्ययनसँग सरोकार राख्ने अर्थशास्त्रलाई नै आधार मात्रे हो भने उत्पादनका लागि चाहिने आधारभूत साधन भनेका भूमि, श्रम, पुँजी र सङ्गठन हुन् । त्यसमा प्रविधि, सुरक्षा लगायतलाई पनि थप गर्न सकिएला ।
उद्यममा कठिनाइ, व्यापारमा लाभ हुने अनि नागरिकहरू विश्व स्तरीय प्रडक्टको उपभोक्तावादमा रमाउने वर्तमान परिवेशमा निजी क्षेत्रले गर्ने सबैभन्दा राम्रो भनेकै उच्चभन्दा उच्च गुणस्तरका धेरैभन्दा धेरै बस्तुहरूले बजार भरिदिने हो । जसको लागि देशमै उत्पादन गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन । त्यसैले, सङ्गठनको सवालमा, नेपालमा राष्ट्रिय उत्पादनको नेतृत्व तत्कालको लागि सरकारले नै लिनु पर्छ ।सन् १७५० को हाराहारीबाट औद्योगिक क्रान्ति गरेको बेलायतले १९७९ मा अपनाएको निजीकरणलाई नेपालले हतारमा १९९० को दशकमै अपनाउँदा आज न अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छ, न त निजी क्षेत्र नै । त्यसैले, घरेलु धरातलमा विकास गरेको प्रक्रियाले जसरी एउटा चरम द्वन्दलाई प्रशंसनीय शान्तिमा बदलेको छ, त्यसै गरी आर्थिक नीति पनि धरातल अुनुकुल विकास गर्न सकिन्छ कि, अब सोच्नै पर्ने भएको छ ।